Universal Bluetooth ကြိုးမဲ့ Android & IOS Gamepad ကို ၀ ယ်ယူပါ WoopShop®
Universal Bluetooth ကြိုးမဲ့ Android & IOS Gamepad
$12.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $19.99
အမျိုးအစား: Gadgets နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
မှစ. သင်္ဘောများ ပိုလန် တရုတ်နိုင်ငံ ရုရှားပြည်ထောင်စု စပိန်
အရောင် အားလုံးနဲ့အနက်ရောင် အဖြူရောင် gamepad bracket ကအတူအဖြူ အားလုံးနှင့်အတူအဖြူ လက်ခံ ကွင်း အနက်ရောင်ဂိမ်း bracket ကအတူအနက်ရောင်
ပိုလန် / အားလုံးနှင့်အတူအနက်ရောင် တရုတ် / အားလုံးအနက်ရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အားလုံးနှင့်အတူအနက်ရောင် အားလုံးနှင့်အတူစပိန် / အနက်ရောင် ပိုလန် / အဖြူရောင် gamepad တရုတ် / အဖြူရောင် gamepad ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အဖြူရောင် gamepad စပိန် / အဖြူရောင် gamepad ပိုလန် / bracket ကအတူအဖြူ တရုတ် / bracket ကအတူအဖြူ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / bracket ကအတူအဖြူ စပိန် / bracket ကအတူအဖြူ ပိုလန် / အားလုံးနှင့်အတူအဖြူ တရုတ်နှင့်အဖြူရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အားလုံးနှင့်အတူအဖြူ စပိန် / အားလုံးနှင့်အတူအဖြူ ပိုလန် / လက်ခံ တရုတ် / လက်ခံ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / လက်ခံ စပိန် / လက်ခံ ပိုလန် / bracket က တရုတ် / bracket က ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / bracket စပိန် / ကွင်း ပိုလန် / အနက်ရောင်ဂိမ်း တရုတ် / အနက်ရောင် gamepad ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အနက်ရောင် gamepad စပိန် / အနက်ရောင် gamepad ပိုလန် / bracket ကအတူအနက်ရောင် တရုတ် / bracket ကအတူအနက်ရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / bracket ကအတူအနက်ရောင် စပိန် / bracket ကအတူအနက်ရောင်
Universal Bluetooth ကြိုးမဲ့ Android & IOS Gamepad - ပိုလန် / အားလုံးအနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
သဟဇာတအမှတ်တံဆိပ် / မော်ဒယ်: Universal
အထုပ် - မရှိပါ
interface အမျိုးအစား: Bluetooth
စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာ၊ တီဗီ Box အတွက်နှင့်ကိုက်ညီသည်
လုပ်ဆောင်ချက်များ - Bluetooth
အချိန်အားသွင်းချိန် - ၂ နာရီ
ကစားချိန်: 5-8 နာရီ
package အလေးချိန်: 0.220 ကီလိုဂရမ်
TV box, PC နှင့် Smartphone များကိုချိတ်ဆက်ရန်ဂိမ်း controller ကိုအသုံးပြုနည်း။
လက်ခံသူကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ SELECT + GEN GAME ခလုတ်ကိုကြာရှည် နှိပ်၍ ဂိမ်း controller ၏ ၂ စက္ကန့်လောက်တွင် TV BOX သို့မဟုတ် PC ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
Android စနစ် - X + HOME ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
IOS စနစ် - Y + HOME ခလုတ်
Android အသုံးပြုသူများ - Octopus ကိုသင်၏ APP စတိုးတွင် Download လုပ်ပါ
IOS အသုံးပြုသူများ: ShootingPlus V3 ကိုသင်၏ APP စတိုးတွင် Download လုပ်ပါ
1 x Z6 ဘလူးတုသ် Gamepad
1 x ကိုကို USB Cable ကို
1 x ကိုအသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်
1 x Adapter (သင်ရွေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်မရွေးချယ်နိုင်သည်)
1x ရပ်တည်ချက် (သင်ရွေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်မရွေးချယ်နိုင်သည်)
Ukrposhta တောင်မှယူကရိန်းကိုအလျင်အမြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ box ကိုပိတ်ထားပေမယ့် joystick ပျက်စီးမပေးပါ။ စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ချက်ချင်းစစ်ဆေးပြီးအားလုံးကောင်းမွန်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်နှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသည်။ ဒါဟာလက်၌အလွန်အဆင်ပြေသည်, sensitivity ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။ 5+ စတိုးအကြံပြုပါသည်။
Der Joystick ist gut, schnelle Lieferung ။ Ich empfehle es weiter ။
Normales Gamepad für das Geld ။ Mibox und spielen မျိုးကြင်နာမှုရှိခြင်း
Excelente produto ။ Fácil de conectareconfigurar! Funciona perfeitamente ။ ရောင်းချသူ comunicativo ။
Muy satisfecha con el producto ။ ငါ llego စူပါရာဒို။
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 59746 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
Multi Pocket ဒေါင်လိုက်ဥယျာဉ်နံရံဆွဲထားခြင်း
အကာအကွယ်အဖုံးနှင့်သံမဏိသံပုရာ & ဒိန်ခဲ grater
လျောက်ပတ်စွာကြည့်သည်၊ စဉ်းစားပြီးအဆင်ပြေသည်။ အလုပ်တွင်ကြည့်ရအောင်